कस्तो अचम्म ! मानिसले झै चाराले ठाडो घाँटी पारेर कुल्ला गरेको भिडियो भाइरल – My Blog
No Comments on कस्तो अचम्म ! मानिसले झै चाराले ठाडो घाँटी पारेर कुल्ला गरेको भिडियो भाइरल
यो भिडियो ट्विटर प्रयोगकर्तामाझ निकै चर्चामा छ । उनीहरूले चराको समझदारीलाई सकारात्मक प्रतिक्रिया दिँदै बुद्धिमानी चरा समेत भन्न भ्याएका छन् । चराको यो रमाइलो दृश्य देखेर तपाईको पनि हाँसो थामिने छैन ।
← ह्यारी-मेघनलाई पुत्रीलाभ, बेलायतबाट बधाईको ओइरो → पाथिभरा माताले हामी सबैको रक्षा गरुन, जेष्ठ २५ गते मंगलबार, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल